संसाभरका नेपालीद्धारा गॆसो आन्दोलनमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता – Gurkha Army Ex-Servicemen's Organisation GAESO
You Are Here: Home » गतिविधि » संसाभरका नेपालीद्धारा गॆसो आन्दोलनमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता
संसाभरका नेपालीद्धारा गॆसो आन्दोलनमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता
Posted by: admin Posted date: February 04, 2012 In: गतिविधि, ताजा समाचार, परियोजना | comment : 0
काठमाडौं । गोरखा भुतपूर्व सैनिक सघं(गेसो)का सभापति पदमबहादुर गुरुङले गोरखाहरुको न्यायपूर्ण आन्दोलनमा सहयोग र समर्थन गर्न संसारभरका नेपालीहरुलाई आग्रह गर्नुभएको छ । बेलायती साम्राज्यद्धारा अन्यायमा पारिएका गोरखा सैनिकहरुको पक्षमा विगत एक्काईस बर्षदेखी न्यायपूर्ण आन्दोलन नयाँ मोडमा पुगेको जानकारी दिनु हुदैं सभापति गुरुङले संसारभरीका गैरआवाशीय नेपालीहरुलाई सहयोग गर्न आग्रह गर्नुभएको हो ।
सम्मेलनमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुहुदै सभापति गुरुङ ।
बुधबारदेखी जारी गैरआवाशीय नेपाली सघंएनआरएनको पाँचौ विश्व सम्मेलनको दोस्रो दिन आजविहीबार गेसोको तर्फबाट कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुहुदै सभापति गुरुङले गेसोले दोस्रो चरणको आन्दोलन अन्तर्गत निमार्ण गर्न लागेको गोरखा स्मारक निमार्णमा सहयोग गर्न आग्रह गर्नुभयो । आफूलाई मानवअधिकार र प्रजातन्त्रको ठेकेदार ठान्ने बेलायती शासकलाई आफ्नै राष्ट्र सेवकहरुलाई घोर अन्याय गरेको दाबी गर्नुहुदै गुरुङले बेलायती शासकको अन्याय बिरुद्ध संसारभर न्यायप्रेमी जनताहरुले आवज उठाउनुपर्ने बताउँनुभयो । उहाँले बेलायती साम्रज्यले गोरखा सैनिकहरु म्ाथि गरेको अन्याय र बिभेदबारे संसारलाई जानकारी दिने उद्देश्यले गेसोले स्मारक बनाउन लागेको बताउँनुभयो । ‘हाम्रा पूर्खाहरुलाई युद्धमा किन मानवढाल बनाईयो कुन-कुन देशमा लगेर कति मारिए कति हराए कति घाईते भए यसरी मारिएका वा घाईतेलाई क्षतिपूर्ति दिईयोकी दिईएन यदि दिएन भने कनि दिईएन गोर्खालीहरुलाई संस्कार र भाषाबिहिन बनाईयो विश्वमा जिम्मेवार हुभनेर आफूलाई दाबी गर्ने बेलायतले दुई सय बर्षसम्मको गोर्खालीहरुको सैनिक सेवालाई किन मान्यता दिएन’ सभापति गुरुङले स्मारक निमार्णको औचित्य बारे भन्नुभयॊ ‘यीनै सवालहरुलाई नेपाली जनता लगायतका विश्वसामु छरलङ्ग पार्ने र दुई सय बर्षदेखी गोर्खालीहरुले बगाउँदै आएको रगत र पसिना मुल्यको खोजी गर्ने उद्देश्यका साथ गेसोले दोस्रो चरणको आन्दोलनको रुपमा स्याङजाको फेदीखोला-८ स्थित साल्मेडाँडाँमा रहेको ३ सय रोपनी क्षेत्रफल जग्गामा गोरखा स्मारक बनाउन लागेको हो ।’
संस्थापक महासचिव एवं सल्लाहकार डा. चन्द्रबहादुर गुरुङ सभापति गुरुङ र एनआरएनका कार्यक्रम सचालक
यो स्मारक विश्वको महत्वपूर्ण र आकर्षक नमुना स्मारक बन्ने र यसलाई एसियाको ‘ईपर’ घोषणा उहाँले बताउँनुभयो । ‘यो विश्वको आकर्षणको केन्द्र बन्नेछ र यहाँ हरेक बर्ष विश्वभरका हजारौ पर्यटकहरु आउनेछन् । यसले नेपाललाई ठुलो आर्थिक लाभ र सैयौं युवायुवतीहरुलाई स्वादेशमै रोजगारीको अवसर पनि मिल्नेछ ।’ उहाको भनाई थियो । सभापति गुरुङले गोर्खालीहरुको दुई सय बर्षसम्मको सैनिक सेवालाई बेलायत सरकारले बेलायती सैनिक सेवाको मान्यता नदिएको जानकारी पनि दिनुभयो । ुगोर्खालीलाई प्रदान गरिने ८ फिगरको आर्मी नम्बर बेलायती सैनिकको आर्मी नम्बरसँग मेल खादैनु सभापति गुरुङले भन्नुभयो ुअर्कातिर गोर्खालीहरुलाई बेलायती सेनामा भर्ती गर्दा बेलायती संसदले पाश गरेको आर्मी नियम कानुन अनु्सार भर्ती नगरी बिग्रेड अफ गोर्खाजका अफिसरहरुको तजबीजले बनाएको नियम अनुसार भर्ती गरेको रहस्य पत्ता लागेको छ । गोरा अफिसरहरुले बनाएको तजबीजले नियम अनुसार भर्ती गरिएकोले नै गोर्खालीहरुलाई समान सुबिधा र पेन्सन नदिएको हो भन्ने रहस्य खुल्यो ।’
यसैविच सबै गैरआवाशीय नेपालीहरुले गेसोले निमार्ण गर्न लागेको गोरखा स्मारकमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । गेसोले निमार्ण गर्न लागेको स्मारकले नेपालीहरुको स्वाभामिनलाई उचो बनाउन सहयोग गर्ने बताउदै गैरआवाशीय नेपालीहरुले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।
सभापतिले प्रस्तुत गर्नुभएको कार्यपत्र :
नेपाली स्वाभिमानको महत्वपूर्ण सम्पदा : गोर्खा स्मारक
(गैरआवासीय नेपाली सम्मेलनका अवसरमा प्रस्तुत)
गोरखा भूतपूर्व सैनिक संघ (गेसो)
हामी सबैलाई विदितै भएको कुरा हो बेलायती साम्राज्यलाई बचाउँनको निमित्त नेपाली युवाहरुले सन् १८५७ को भारतको सिपाही विद्रोहदेखि लिएर प्रथम र द्वितीय विश्वयुद्ध लगायतका अनेकौं डरलाग्दा युद्धहरु लडे । ती युद्धहरुमा कति गोर्खा मारिए कति घाइते भए वा युद्धमा हराए भन्ने तथ्याङ्क बेलायती साम्राज्यले अहिलेसम्म पनि सार्वजनिक गरेको छैन । यस विषयमा नेपाल सरकारले पनि कुनै चासो देखाएको पाईएन । तथापि विभिन्न स्रोतहरुबाट प्राप्त जानकारी अनुसार विश्वको जनसंख्याको अनुपातमा सबैभन्दा बढी मर्नेहरु गोर्खालीहरु नै थिए । तथ्यहरुका अनुसार ती युद्धहरुमा करिब ६० हजार गोर्खालीहरुले आफ्नो जीवनको बलिदान गरेका थिए । युद्धमा एक जना मर्छ भने दुई भन्दा बढी नै घाइते हुन्छन् । यसैबाट अनुमान गर्न सकिन्छ की कति गोर्खालीहरु घाइते भएका थिए । कुनै पनि युद्धहरुमा नेपाल ुपक्षका रुपमा संलग्न थिएन । तर तत्कालीन नेपालका जहानियाँ राणा शासक र बेलायती साम्राज्यले आ-आफ्नो स्वार्थको निम्ति गोर्खालीहरुलाई बेलायतको पक्षबाट युद्धमा होमीन बाध्य बनाए । ती युद्धहरुमा गोर्खाहरुले आफ्नो बहादुरीे प्रर्दशन गरे । त्यसबापत भिक्टोरियाक्रस लगायतका अनेकौ तक्माहरु पनि दिई टोपल्यो । बेलायतका तत्कालिन शत्रु मानिएका राष्ट्रका सेनाहरुलाई गोराहरुको आदेशमा इमान्दार गोर्खाहरुले मारे । नाजी जर्मनलगायत अन्य विभिन्न बेलायतविरोधी राष्ट्रहरुको पाजाबाट बेलायतलाई मुक्त गराए । फलत ः बेलायत विश्वमा एउटा सर्वशक्तिमान राष्ट्र बन्न पुग्यो र विश्वले शान्ती पायो । शान्ति स्थापनापछि विकास दु्रतगतिमा अघि बढ्यो । हाम्रो छिमेकी भारत र चीनको विकास पनि दोस्रो विश्व युद्धपछि नै भएको हो । तर नेपालको भने अधोगती सुरु भयो ।
गोर्खालीहरुले बेलायतको पक्षबाट लड्दा यति ठुलो बलिदान नगरेको भए न त विश्वमा शान्ति स्थापना नै हुन्थ्यो न त बेलायत सर्बशक्त्तीमान राष्ट्र नै बन्ने थियो । यो तथ्य बेलायतले कदापि बिस्रन मिल्दैन । हो यसैले गर्दा बेलायतले विश्वका सामु हामीलाई बहादुर पनि बनाई टोपल्यॊ । नोकरीको दौरानमा बेलायतकै संस्कार र जीवनशैली अनुसार बाँच्न पनि सिकाइदियो । हामी नेपाली समाजमा निकै हुने खाने जस्तो पनि देखियौं । हामीलाई नेपाली समाजभन्दा फराकिलो ढंगले बाँच्न सिकाईदियो । यति प्राप्त गर्न हामीले के-के गुमायौं
१. बेलायतले नेपाली युवाहरुलाई भर्ती गर्दा नेपालको कुल जनसंख्या करिब ४० लाख मात्रै थियो । त्यतिबेला राष्ट्र निमार्णका निम्ती ती युवा शक्त्ती आफ्नै राष्ट्रलाई अतिआबश्यक थियो । ती युवाहरु देशमै बसेका भए जहाँनिया राणा शासन बिरुद्ध उतिबेला नै सघर्षमा उत्रिने थिए । नेपालमा प्रजातन्त्र लोकतन्त्र र गणतन्त्र त्यतिबेला नै आईसक्ने थियो । र दुई मित्र राष्ट्र चीन र भारत जसरी नेपालले पनि विकासको गति लिएर अहिले एसियाको स्वीजरल्यान्ड बनीसक्थ्यो । यसको हकदार सबै नेपाली हुनेथियौं । हामी पनि विकसित राष्ट्रका नागरिक जस्तै सम्पन्नशाली भईसकेका हुनेथियौ । नेपाल र नेपालीको बरबादीको मुख्य कारण तत्कालीन जाहाँनिया राणा शासक र बेलायती शासकको स्वार्थ नै थियो भन्ने तथ्य हामी नेपालीहरुले कदापी भुल्न मिल्दैन ।
२.विश्वयुद्धपछि पेन्सन वा राहतको त कुरै छोडौ आलो घाउको उपचार समेत नगरी हजारौ गोर्खालीहरुलाई खाली खुट्टा नेपाल फर्काइयो । बेलायती माटो र राजमुकुटका लागि लड्दा घाईते अपाङ्ग शरीर तिनका निर्दोेष परिवारको लागि बोझ हुन पुग्यो ।
३. बेलायती संस्कार र जीवनशैलीमा जीउँन अभ्यस्त भईसकेका हामी आफ्नै गाउँमा फर्किदा सैयौं कागको माझमा एउटा सेतो बकुला बस्न गएको जस्तो भयौंे । आफ्नॊ सामाजिक सँस्कार र रीतिरिवाजमा घुलमिल हुन नसकेर बसाईँ सर्दैै सहर पस्यौं । फलत ः हामी भुगोल भाषा संस्कृति र सभ्यताविहिन बेवारिसे नागरिक जस्तो बन्न पुग्यौं ।
४.हाम्रा कलिला नानीहरु भाषा र सँस्कारविहीन बनाईए । एकातिर नेपाली समाजले हाम्रा सन्ततीहरुलाई ुबेलायती लाहुरेको सन्तानु भनेर अपहेलित गर् यो अर्कोतिर बेलायतीहरुले ुगोर्खेु भनेर अपमान गरे । अहिले गोर्खाली र तिनका सन्तानहरु दिशाविहीन अवस्थामा पुगेका छन् । अपसंस्कार र अपसंस्कृतिको शिकार बनेर उनीहरुको भबिष्य अन्धकारतिर उन्मुख छ । विश्वमा बहादुर कहलिएका यी बहादुरका सन्ततिहरु न नेपाली भए न बेलायती नै । उनीहरुले नेपालमा ुलाहुरेको छोराछोरीु भनेर जागीर पाउँदैन र बेलायती शासकले ुगोर्खेका छोराछोरीु र योग्यता नपुगेको भनी जागीर दिदैन । कुनै जागीर नभएपछि यी युवायुवतीहरु स्वाभाविक रुपले विकृतीको भासमा फस्दै गईरहेका छन् ।
५। बेलायती संस्कार र जीवनशैलीमा बाँच्न अभ्यस्त भईसकेका गोर्खालीहरुलाई नेपाल फर्केपछि केहीलाई मात्र अति न्युन पेन्सन दिईयो । यसले बिहान बेलुकाको हात मुख जोर्न समेत धौ-धौ भएपछि बाध्य भएर लाहुरेहरु ुसेकेन्ड करियरु को खोजीमा विश्वमा भौतारिन पुगे । तर युद्धमा बहादुर कहलिएका गोर्खालीहरुले जहाँ गए पनि चौकिदारभन्दा माथिको जाँगीर पाउँदैनन् । र मर्दा समेत मृत्यु संस्कारका लागि चन्दा उठाउनु पर्ने अवस्था भयो । स्मरण रहोस् ः भिसी लक्षिमान गुरुङ बेलायतमै मर्दा उनको मृत्यु संस्कारको लागि चन्दा उठाउँनु परेको थियो
६. बेलायती शासकको नजरमा ुबहादुरु बन्ने होडबाजीमा आफ्नो र जन्मभूमिको सर्वश्व गुमाउनु बाहेक हामीले पाएको एक मात्र विशेष उपहार हो ः विश्वको नजरमा गोर्खे भनेका ुरक्तपिपासु र ज्यानमाराु हुन् भन्ने परिचय । विश्वसामु नॆपालीको यस्तो अपमानपूर्ण परिचय र पहिचान बनाईयो । दुई सय बर्षसम्म बेलायती साम्राज्यको बफदारीपूर्ण सेवा गरेबापत हामीले प्राप्त गरेको उपलब्धी यही नै हो भन्दा अतियुक्त्ती नहोला ।
आदरणीय गैरआवासीय नेपाली मित्रहरु
गेसो आन्दोलनका दौरानमा बेलायत सरकारले गेसो र बिशेषगरी गेसोका सभापति पदमबहादुर गुरुङको नामै किटेर करोडौ रुपियाँ भ्रष्टचार गरेको सुनियोजित प्रचार गरायो । दुबै देशका शासकहरुले आतंककारी घोषणा गर्न समेत पछि परेनन् । बेलायतबाट प्रकाशित सागा म्यागेजिनमा ३८ लाख पाउन्ड उठाएर नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनमा लगानी गरेको छ र गेसोका नेतृत्व आईआरएरिपब्लीकन आर्मीं जस्तै आतकंकारी हो भन्ने समाचार छाप्न लगाईयो । जनलर काउनले गेसोलाई समाप्त पार्न योजना बनाएर तत्कालीन राजा विरेन्द्रलाई पेश समेत गरे । जब यसरी दुबै देशका शासकले गेसोलाई घेराबन्दी गरेपछि गेसोले पनि उसका नियतहरुबारे अध्ययन गर्दा अनेकौ रहस्यहरु खुल्दै गए । ती रहस्यहरु यस प्रकार छन् ः
१ गोर्खालीहरुको दुई सय बर्षसम्मको सैनिक सेवालाई बेलायत सरकारले बेलायती सैनिक सेवाको मान्यता नदिएको रहस्य खुल्यो ।
२ गोर्खालीलाई प्रदान गरिने ८ फिगरको आर्मी नम्बर बेलायती सैनिकको आर्मी नम्बरसँग मेल खादैन ।
३ गोर्खालीहरुलाई बेलायती सेनामा भर्ती गर्दा बेलायती संसदले पाश गरेको आर्मी नियम कानुन अनु्सार भर्ती नगरी बिग्रेड अफ गोर्खाजका अफिसरहरुको तजबीजले बनाएको नियम अनुसार भर्ती गरेको रहस्य पत्ता लाग्यो । अफिसरहरुको तजबिजले बनाएको नियम अनुसार भर्ती गरिएको हुनाले गोर्खालीहरुले सामन्य गल्ती गर्दा पनि अफिसरहरुको सनकको भरमा सरकारलाई थाहै नदिई सेवाबाट बर्खास्त गरेर नेपाल पठाईन्छ । उदाहरण ः अमेरिकाको हवाइ द्वीपमा भएको विवादमा १ सय ११ जनाको एक गोर्खा कम्पनी नै खारेज गरेर फिर्ता पठाईए ।
४ गोरा अफिसरहरुले बनाएको तजबीजले नियम अनुसार भर्ती गरिएकोले नै गोर्खालीहरुलाई समान सुबिधा र पेन्सन नदिएको हो भन्ने रहस्य खुल्यो ।
यी माथिका रहस्यहरुबाट प्रश्न उठ्छ ुहाकिमको तजबिजले बनाएको नियम अन्तर्गत भर्ती गरेर युद्धमा लानमा पाईन्छ की पाईन्दैन ु हाकिमको तजबिजले बनाएको नियम अनुसार सेनामा भर्ती गरेर युद्धमा लगिन्छ भने त्यो घोर अपराध र गैरकानुनी हुन्छ । यदि यो अपराध र गैरकानुनी ठहरियो भने यसको जहाफदेही सम्बन्धीत सरकार हुनुपर्छ की पर्दैन गेसोको मुल सवाल भनेको यो हो । हाम्रा पूर्खाहरुलाई युद्धमा किन मानव ढाल बनाईयो सम्बन्धीत पक्ष अन्तराष्ट्रिय अदालतको कठघरा र फाँसीको तखतामा उभिनुपर्छ की पदैन गेसो यसको जवाफ सम्बन्धीत सरकारहरुसँग माग्दछ । यी र यस्ता रहस्यहरु खुल्ने रहेछ र पो † गेसो र उसका नेतृत्व माथि दुबै देशका शासकहरु यसरी खनीएका रहेछन् । गेसोलाई समाप्त पार्न केही भुपु सैनिकहरुलाई संगठन खोल्न लगाएर गेसो बिरुद्ध प्रयोग गरिएको रहेछ भन्ने यहाँनिर यहाँ स्पष्ट हुन्छ । आफूलाई मानवअधिकार र प्रजातन्त्रको ठेकेदार दाबी गर्ने बेलायती शासकले दुई सय बर्षदेखी आफ्नै माटो र राजमुकुटका लागि रगत र पसिना बगाउँदै आएका आफ्ना राष्ट्र सेवकलाई यस्तो व्याबाहार गर्नु बेलायती शासकको कस्तो नैतिकता र नीति हो
एक्काईस बर्षसम्म गेसोले अनवरत रुपमा न्यायिक संघर्ष गर् यो । गेसोले दुबै देशका न्यायप्रेमी जनताका साथै साचार माध्यमबाट सहयोग र समर्थन पायो । परिणामत : बेलायती उच्च अदालतले बेलायत सरकारले गोरखा सम्बन्धी बनाएको नीति ुअन्लफुल ईलीगल एण्ड ईराशनलु छ र समानताको सिद्धान्तका आधारमा नीति बनाई समानता देऊ भन्ने आदेश जारी गर्यो । बेलायती संसदमा समेत गोर्खालीहरुलाई समानता दिने की नदिने भन्ने सम्बन्धमा चारघन्टासम्म बसह चल्यो । सदनमा मतदान हँुदा गोर्खालीहरुको पक्षमा २१ मत बढी पर्यो । र बेलायत सरकार समानताका नीति ल्याउन बाध्य भयो । गोर्खाली र तिनका परिवारहरु बेलायत जान थाले । उनीहरुले सुबिधा पनि पाउँन थाले । तर गोर्खालीहरुलाई दिईएको सुबिधा सैनिक सेवाको नभई शरणार्थीलाई दिईने सुबिधा दिईएको भन्ने रहस्य खुलेको छ । जबकी हामी शरणार्थी होईनौ हामी त दुईसय बर्ष अघिदेखी बेलायतका लागि लड्दै आएका बेलायती राष्ट्र सेवक हौ । आफ्नो लागि लड्दै आएका राष्ट्र सेवकहरुलाई शरणार्थीको दर्जामा राख्नु बेलायती शासकको कस्तो मानवअधिकार हो यहाँनिर प्रश्न के उठ्छ भने अन्य देशका लाखौ नागरिकहरुले बेलायतमा आएर बसोबास गरॆ सबै सुबिधा पाउने तर गोर्खालीहरुले त्यो सुबिधा पाउन एक्काईस बर्षसम्म यति ठुलो कठोर संघर्ष गर्नु पर्ने कारण के ?
माथि उल्लेखित तथ्यहरुबाट प्रमाणित हुन्छ की नेपाली र नेपालको बर्बादीको मुख्य कारण बेलायती साम्राज्य र तत्कालीन नेपालका शासक नै हुन् । यो तथ्यलाई हामी नेपाली कसैले पनि कदापी भुल्नु हुदैन । बेलायतको समृद्धि गोर्खाहरुको रगतले लत्पतिएको छ । बेलायती सरकारका भव्यताका प्रत्येक पर्खालहरुमा गोर्खालीहरुको रगत र पसिना पोतिएको सत्यतालाई बेलायती शासकले कदापी पनि भुल्न मिल्दैन । बेलायतको प्रत्येक भव्यताहरुमा बेलायती शासकहरुको जत्तिकै हक र अधिकार गोर्खाहरुको पनि छ । तर आज बेलायतमा जाने गोर्खाहरुलाई शरणार्थीको दर्जा दिइएको छ । बेलायती शासकले गोर्खा-गोर्खा बिचमा बिभाजन गरेर गेसो आन्दोलनलाई शिथिल पार्न १९९७ अघि र पछि भन्ने षड्यन्त्रपूर्ण नीति ल्यायो । १९९७ अघिकालाई केही नदिने १९९७ पछि अवकाश पाएका वा भर्ती भएकालाई सबै प्रकारका सुबिधाका साथै बेलायती नागरिकता दिने एकतर्फी घोषणा गर् यो । यसले गर्दा अब भर्ती भएर जाने कुनैपनि गोर्खालीहरु नेपाल फर्केर आउँने छैनन् । र उनीहरुको एकपैसा रेमिन्ट्यान्स पनि आउँने छैन । एकतर्फी रुपमा यस्तो आपत्तीजनक निर्णय गरिदा समेत नेपाल सरकारले अहिलेसम्म कुनै पनि प्रतिकि्रया जनाएको छैन ।
पहिलो र दोस्रो विश्व युद्धमा असाधारण वीरता प्रदर्शन गरेका १३ जना गोर्खालीहरुले भिसि पाएका थिए । ती सबै पदक बिभिन्न बहानामा चतुर गोराहरुले भिसीको घर-घरमा गएर ललाई- फकाइ अमुल्य तक्मा सित्तैमा लगेका छन् । यसले पनि प्रमाणित हुन्छ की चतुर गोराहरुले गोर्खाहरुको उर्वर जवानी त लुट्यो नै जीवनको उत्तराद्र्धमा समेत पिडा र अपमान दिन छोडेनन् ।
अब बेलायत सरकारसँग समानता मात्रै होईन हाम्रा पूर्खाहरुलाई युद्धमा किन मानवढाल किन बनाईयो कुन-कुन देशमा लगेर कति मारिए कति हराए कति घाईते भए यसरी मारिएका वा घाईतेलाई क्षतिपूर्ति दिईयोकी दिईएन यदि दिएन भने कनि दिईएन गोर्खालीहरुलाई संस्कार र भाषाबिहिन बनाईयो विश्वमा जिम्मेवार हुँ भनेर आफूलाई दाबी गर्ने बेलायतले दुई सय बर्षसम्मको गोर्खालीहरुको सैनिक सेवालाई किन मान्यता दिएन यीनै सवालहरुलाई नेपाली जनता लगायतका विश्वसामु छरलङ्ग पार्ने र दुई सय बर्षदेखी गोर्खालीहरुले बगाउँदै आएको रगत र पसिना मुल्यको खोजी गर्ने उद्देश्यका साथ गेसोले दोस्रो चरणको आन्दोलनको रुपमा स्याङजाको फेदीखोला-८ स्थित साल्मेडाँडाँमा रहेको ३ सय रोपनी क्षेत्रफल जग्गामा गोरखा स्मारक बनाउन लागेको हो । यो स्मारक विश्वको महत्वपूर्ण र आकर्षक नमुना स्मारक बन्नेछ । हामी यसलाई एसियाको ुईपरु घोषणा गर्नेछौ । यो विश्वको आकर्षणको केन्द्र बन्नेछ र यहाँ हरेक बर्ष विश्वभरका हजारौ पर्यटकहरु आउनेछन् । यसले नेपाललाई ठुलो आर्थिक लाभ र सैयौं युवायुवतीहरुलाई स्वादेशमै रोजगारीको अवसर पनि मिल्नेछ । यो स्मारकको डिजाईन वरिष्ठ वास्तुकलाविद् इन्जिनीयर शंकरनाथ रिमाललॆ गरीरहनुभएको छ । अब केही दिनमै यो डिजाईन सार्बजानिक हुनेछ ।
स्मारकको पहिलो खण्डमा दुईवटा विश्वयुद्ध र अनेकौं क्षेत्रीय युद्धहरुमा बेलायती पक्षबाट लड्दा ज्यान गुमाएकाहरुको सम्मानमा समाधि करीब १ सय ४० फिट अग्लो अत्याधुनिक टावर म्युजियम र प्राज्ञिक अध्ययन स्रोत केन्द्र लगायत आकर्षक शान्ति बाटिका निर्माण गरिनेछ । दुई सयजनाको क्षमता रहने यस अत्याधुनिक टावरमा अत्याधुनिक रेष्टुराँ पनि रहनेछ । टावरबाट पोखराका सबै पर्यटकीय स्थलको मनोरम दृश्यका साथै अन्नपूर्ण धौलागिरी गणेश हिमाल लगायतका दर्जनौ हिमशिखरहरु नजिकैबाट अवलोकन गर्न सकिनेछ । दोस्रो खण्डमा एकै ठाउँमा नेपालका ११ जातजातिका संस्कृतिको विशिष्ट पहिचान दिने सांस्कृतिक घरहरुको निमार्ण गरिनेछ ।
गोर्खा स्मारक ः
गोर्खालीहरु विश्वको जहाँ-जहाँ मारिएका थिए ती देशबाट अस्तुको रुपमा एक मुठी माटो ल्याउँनेछौ । स्मारकको पिधमा त्यो माटोलाई राखेर आ-आफ्नो सँस्कार अनुसार जातिय पुरेतहरुद्धारा पितृहरुको चिरआत्मको शान्तिका लागि पुजा गर्न लगाउँछौं । उनीहरुको सम्मान र सम्झनाका लागि यस स्मारकमा पल्टनीयाँ काईदाले प्रत्येक बिहान-बेलुका विगुल र पाईप बजाईनेछ ।
गोर्खा म्यूजियम :
यो म्यूजियमसंग्राहलायसंसारका म्यूजियमहरुभन्दा फरक विषयवस्तुको हुनेछ । यसमा अन्य म्यूजियममा जस्तो गोर्खाहरुको गौरवशाली वीर गाथाको परिचय र गुनगान हुने छैन बरु गोर्खालीहरुलाई बेलायती सेनामा भर्ना सुरु गर्दा नेपालीहरुको आर्थिक समाजिक राजनैतिक सांस्कृतिक अवस्था कस्तो थियो भर्तीप्रथाले हामी र हाम्रो राष्ट्रको कसरी बरबादी भयो अहिलेसम्म पनि बेलायती शासकले रोजगारी दिने नाममा कसरी मानव व्यापार गरिरहेको छ र गोर्खामाथि गरिएको शोषण र बिभेदका तथ्यहरुको स-प्रमाण अभिलेख राखिनेछ । गेसो आन्दोलनको दौरानमा गेसोलाई समाप्त पार्न गरिइएका अनेकौ षड्यन्त्रहरुका अभिलेख राखिनेछ ।
साँस्कृतिक ग्राम ः
गेसॊलाई प्राप्त जानकारी अनुसार युद्धमा गुरुङ मगर राई लिम्बु तमाङ शेर्पा थकाली नेवार क्षेत्री बाहुन र दलित जातिका मारिएका थिए । यीनै जातिहरुको आफ्नो गाउँले सँस्कार सँस्कृति अनुसारको परम्परागत सांस्कृतिक घरहरु बनाउँनेछौं । घर निर्माण भएपछि आफ्नो जातिको सँस्कार सँस्कृति अनुसार काजकि्रया गरी रोईरहेका पितृहरुको आत्मलाई स्वार्ग तार्ने छौं । यो कार्यमा विश्वका साचार माध्यमहरुलाई निमन्त्रणा गरिनेछ । करोडौको लगानीमा निमार्ण हुने यो गोरखा स्मारक विश्वको एउटा अनौठो सम्पदा र नमूना तीर्थस्थल हुनेछ । यो स्मारकले नेपाल र विश्वभर छरेर रहेका हामी नेपालीहरुको स्वाभिमानको यथार्थ बारेमा विश्वसामु बताउँनेछ । नेपालको अहिलेको गिर्दो अवस्था र दुर्गति हुनुमा बेलायती साम्राज्य र तत्कालिन नेपालका शासक नै जिम्मेवार छ भन्ने कुरा छर्लङ्ग पारिनेछ ।
आफ्नै भूमिमा आफ्नै राष्ट्रको सामाजिक आर्थिक र भौतिक समृद्धिका लागि अहोरात्र जुट्नु पर्ने यस घडीमा तपाईं हामीे रोजगारी र आर्थिक अवसरको खोजीमा दुनियाँका विभिन्न मुलुकमा भौंतारिएका छौं । तीनै मुलुकको समृद्धिका लागि आफ्नो प्रतिभा र उर्जा लगानी गरिरहेका छौं । यता हाम्रो मुलुक संसारका अति गरीब मुलुकको सूचिबाट माथि उठ्न सकेको छैन । यसका पछाडि तत्कालिन नेपालका शासक र बेलायती साम्राज्यकॊ गलत नीति नै जिम्मेवार छ भन्ने गेसोको निस्कर्ष हो । जतिबेला बेलायतले नेपालीहरुलाई भर्ती गर्न थालेको थियो । त्यसबेला नेपाल र नेपाली गरीब थिएन बरु अहिले विश्वका समृद्ध मुलुककै हाराहारीमा थियो । हामीले बचाइदिएका ती मुलुकहरु दोस्रो विश्वयुद्ध लगत्तै सम्पन्न भएर नेपालीलाई रोजगारी दिने स्थानमा पुगे नेपाल तिनका लागि कामदार उत्पादन गर्ने कारखाना मात्र बन्न पुग्यो । यसै कारण हामी स्वाभीमानी नेपालीहरु विश्वको बिभिन्न मुलुकमा पुगेर उनीहरुकै सेवा गर्न बाध्य भयौ । तत्कालीन शासकहरुले हाम्रो स्वाभिमान गुमाइदिए । हाम्रो राजनीतिक र आर्थिक दिशा भताभुंग बनाईदिए ।
गोरखा स्मारक त्यही परम उद्देश्यकासाथ बनाउन लागेका हौं जसबाट नेपालीको स्वाभिमान उठोस् । हाम्रो गर्वका रुपमा बनाउँन लागिएको गोरखा स्मारक निर्माणमा आर्थिक मानसिक सहयोग पुर् याउँन सकेका खण्डमा त्यो उद्देश्य पूरा गर्न सकिनेछ । तपाईंहरुको विवेकपूर्ण समर्थन र लगानीले हाम्रो राष्ट्रिय स्वाभिमानले शिर ठाँडो पार्न मद्दत पुग्नेछ । यस स्मारकले नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा समेत नौलोद्वार खुल्नेछ । त्यस क्षेत्रमा लगानी गर्न ईच्छुकहरुलाई लगानी गर्नेका लागि प्रसस्त मार्ग समेत खुल्नेछन् । अन्तमा ः यस्तो महत्वपूर्ण अवसरमा गेसोलाई समय दिनु भएकोमा आयोजकप्रति हार्दिक आभार प्रकट गदै सम्मेलनको सफलताको लागि गेसोको तर्फबाट हार्दिक शुभकामना व्याक्त गर्दछु ।
13z अक्टोबर २०११